Is rasaaseyn ka dhacday Muqdisho Iyo Taliska Ciidanka Boliska Oo Ka Hadlay -
HomeWararkaIs rasaaseyn ka dhacday Muqdisho Iyo Taliska Ciidanka Boliska Oo Ka Hadlay
Is rasaaseyn ka dhacday Muqdisho Iyo Taliska Ciidanka Boliska Oo Ka Hadlay
Ciidamo Boolis ah oo ku sugnaa bar koontarool iyo dablye hubeysan ayaa is rasaaseyn ku dhex martay agagaarka Sey Biyano ee degmada Hodon magaalada Muqdisho.
Falkan ayaa waxaa la sheegay uu yimid kadib markii labo ruux oo hubeysan ay isku dayeen inay xoog ku maraan bar koontorool oo Ciidamada Booliska dowladda Soomaaliya ku leeyihiin Sey Biyaano,hayeeshee markii dambe la toogtay ay rasaas kala kulmeen ciidamadii halkaas ku sugneyd.
Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed SONNA ayaa daabacday in dadka la dilay ay ahaayeen rag ka tirsan Al-shabaab,isla markaana ay toogteen Ciidamada amniga dowladda.
Wararka ayaa waxaa kale oo ay intaa ku darayaan in dad rayid ah oo aan tiradooda la sheegin ay ku dhinteen is rasaaseyntan.
Sidoo kale Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa faah faahin ka bixiyay qarixii ka dhacay Magaalada Muqdisho iyo Ciidamada amniga oo isla Magalada Muqdisho ku toogtay laba nin oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab.Taliye kuxigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliya Zakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in Ciidamada Ammaanka Soomaaliya ay ka warhayeen xogta qarixii Maanta ka dhacay Magalada Muqdisho,isla markaana ciidamada amniga ay fashliyeen.
“Hay’adaha Amniga oo xogta qaraxa horay ula socday ayaa manta fashiliyay qaraxa la rabay in shacabka lagu waxyeeleeyo, dhagar qabaha ayaa is ku dayay in uu gaariga xoog ku soo jiirsiiyo goob u xiran Ciidamada amaanka, waxaa hay’adaha amaanka u suurtagashay in ay xiraan goobtaas shacabkana ay ka fogeeyaan qaraxa ka hor. Nasiib wanaag wax dhimasho iyo dhaawac shacab ah kama aysan dhalanin qaraxaas ayay tiri Taliye Zakiya.
Xaalada Magalada Caasimadda ah ee Muqdisho ayaa Maanta ka duwaneyd maalmihii la soo dhaafay oo amniga Magaalada uu ahaa mid wanaagsan,waxaana weerarka lagu qaaday koontoroolka ciidamada Dowladda ee seybiyaano mas’uuliyidiisa sheegtay Al-Shabaab.